Isikhokelo sokufaka iMicrosoft Access 2010
Ukufikelela kwi-SharePoint ne-Backstage View 2010
Ngenxa yokufumaneka kwazo kunye nokusebenza okuguquguqukayo, iMicrosoft Access 2010 isisetyenzisiwe esasetyenziswayo namhlanje. Ufikelelo lwe-2010 luqalise inguqulo yefayile yefayile ye-ACCDB eyayixhasa i-SharePoint, eyavumela ukuxhasa i-Mac ngokusebenzisa isiphequluli okokuqala. Entsha ekuFinyeleleni ngo-2010 kwakuyijonga lokubuyela emuva apho ungafikelela kuyo yonke imiyalelo yesiseko sedatha.
I-ribbon kunye neefowuni zokuhamba, ezazisungulwa kwi-Access 2007, zifumaneka kwi-Access 2010.
Izinzuzo zoFikelelo ka-2010
Ukuphucula umhloli wokupela
Inkxaso ye SharePoint
Umsebenzisi womsebenzisi omtsha
Ukuphuculwa kwengcaciso yedatha
Indlela yokufaka ukufikelela kwi-2010
Inkqubo yoFakelo yokuFikelela ichanekileyo.
Qinisekisa ukuba inkqubo yakho ihlangabezana neemfuno ezisisiseko zokuFumana. Uya kufuna ubuncinane i-500 MHz okanye iprosesa ngokukhawuleza nge-256MB ye-RAM. Uzakufuna ubuncinane ubuncinane be-3GB yendawo yendawo yedisk ekhuphakileyo.
Qinisekisa ukuba inkqubo yakho yokusebenza isesikolweni. Uzakufuna iWindows XP SP3 okanye kamva ukuqhuba ukuFinyelela ngo-2010. Ingqiqo enhle ukusebenzisa zonke izilungiso zokhuselo kunye ne-hotfixes kwinkqubo yakho ngaphambi kokuba ufake i-Access.
Faka ii-CD kwi-CD yakho ye-CD. Inkqubo yofakelo iqalisa ngokuzenzekelayo kwaye ikucela ukuba ulinde ngelixa inkqubo ilungiselela uMncedisi wokufaka.
Isinyathelo esilandelayo senkqubo siyakwenza ukuba ufake into ebalulekileyo yemveliso kwaye wamukele imimiselo yesivumelwano selayisenisi.
Ukuba ungathanda ukufaka i-Suite ye-Office okanye usebenzisa i-CD kuphela ye-Access, ungakhetha Faka iNje kwiskrini esilandelayo. Ukuba ufuna ukumisela ukufakela kwakho, nqakraza Yenza ngokwezikhundla .
Xa ukufakela kugqityiwe, unokuthi uvuselelwe ikhompyutha yakho. Hamba phambili wenze njalo.
Emva kokufakela u-Access 2010, tyelela iwebhusayithi yeMicrosoft ukuze ufunde amavidiyo kwi-software.
Ukutya iMbewu ye-Apple okanye iCherry Pits
UMtyholi kunye noTom Walker Iziganeko ezinkulu
IGeorgia State GPA, SAT kunye ne-ACT Data
Izipho Ezinkulu Zomntu Ohlala Naye